Faah faahin:- Qarax ka dhacay magaalada Muqdisho iyo dowladda Soomaaliya oo ka hadashay – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Qarax ka dhacay magaalada Muqdisho iyo dowladda Soomaaliya oo ka hadashay
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo maanta qarxay dhabarka dambe ee guriga hooyooyinka oo ku yaalla degmada X/weyne ee magaalada Muqdisho.
Gaarigaasi qarxay ayaa la sheegayaa inuu ahaa mid lasoo dhigay dhabarka dambe ee guriga hooyooyinka ee degmada X/weyne, waxaana inta aanu gaarigaasi qarxin kahor howgalo halkaasi ka waday ciidanka dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa nabad-sugidda qaranka ee NISA.
Dhinaca kale, war-saxaafadeed goordhaw kasoo baxay xafiiska wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Injineer C/raxmaan Cumar Cismaan (Yariisow) ayaa lagu sheegay in ciidanka nabad-sugidda qaranka ee NISA ay haatan gacanta ku haayaan dadkii watay gaariga qarxay.
“Madaxda qaranka iyo dowladda federaalku waxey ammaaneen doorka hay’adaha amniga ay ku badbaadiyeen shacabka Soomaaliyeed oo aan wax qasaare ah geysan, sidoo kale waxaa gacanta lagu dhigay dadkii watay gaarigaas oo u socday inay shacabka dhibaateeyaan. Hay’adaha amniga ayaa gaarigaas ku raadjoogay ka dib markii shacabku ay soo gudbiyeen macluumaad muhiim u ahaa hay’adaha amniga. Macluumaadkaas ay shacabka soo gudbiyeen ayaa suurtogeliyey in dadkaas la qabto, isla markaasna la bad-baadiyey shacabka Soomaaliyeed.”
Ugu dambeyn, Injineer Yariisow ayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasto oo ay joogaan ugu baaqay inay si buuxda u taageeraan hay’adaha amniga ee dlaka, si loo helo amni iyo nabad, taas oo ah mida kaliya ay dadka dhan u wada baahan yihiin.